Madaxweynaha DGPL oo Casho Sharaf loogu sameeyey Minneapolis....
Waftigii Dr. Faroole oo Si weyn Loogu Soo Dhaweeyey Minnesota
Daawo: Sawirada oo Hal bog ka muuqda
ama Sawirada oo ah Slide Show Daawo
Wafti uu hoggaaminayo madaxweynaha DGPL, Dr. C/raxmaan Maxamed Faroole oo beryahanba booqasho ku joogay Maraykanka aya xalay (June 30, 2009 oo ay soo galaysay July 1) Minneapolis kaga qayb galay xaflad lagu qabtay Minneapolis Convension Center oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u farabadan. Xafladdaas oo soo qaban qaabiyeeen Ururka Puntland Diaspora Forum.
Dastuurka Cusub ee Puntland
Waftiga Madaxweynaha DGPL waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha DGPL Gen. Cabdullaahi Axmed Ilkajiir iyo Wasiirka Qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah Faarax Dhalac iyo xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha.
Khudbaddii uu Dr. C/raxmaan Faroole u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Minnesota waxaa lagu beegay ayadoo ay daqiiqado ka dhiman tahay 1da Luulyo oo ah maalinta xornimada iyo Midnimadii Soomaaliya.
Khudbadii Faroole u jeediyey reer Minnesota (Minneapolis Convension Center)
Halkan ka Dhegeyso ama Soo rogo (mp3) - (July 1, 2009)
Sidoo kale khudbadii Dr. Faroole u jeediyey jaaliyada Minneapolis (Hilton Hotel)
Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3) - (June 29, 2009)
VIDEO Khudbadii Faroole HALKAN KA DAAWO
Reer Minnesota waxay Madaxweynaha DGPL u dhiibeen ubax loogu magac daray ubaxii Nabadda, waxaana ubaxaas Dr. Faroole guddoonsiiyay Sheikh Sacad.
Hadalkii uu jeediyey Sheikh Sacad Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Habeenimadii Xalay (June 29, 2009) ayaa magaalada Minneapolis waxaa casho sharaf ballaaran magaalada Minneapolis loogu sameeyey madaxweynaha DGPL iyo wafti uu hoggaaminayey oo booqasho ku yimid Gobolka Minnesota. Xafladdaas oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u farabadan. Dr. C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa dadweynihii xafladda isugu yimid u jeediyay warbixin ku saabsan dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland. (hoos ka dhegeyso)
Ayaado Quraan ah oo lagu furay xafladda kaddib waxaa magarafoonka lagu soo dhaweeyey Xaawo Ayeeyo oo buraan bur tirisay.
Buraanburkii Xaawo Ayeeyo Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Kaddib waxaa hadalka lagu wareejiyay Maxamed Cumar Dhigic Dhigic oo hadal kooban jeediyay
Dhigicdhigic Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Waftiga Madaxweynaha la socdey waxaa ka mid ahaa Wasiirka Qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah Faarax Dhalac iyo wasiirka arrimaha gudaha DGPL Gen. Cabdullaahi Axmed Ilkajiir oo hadal kooban ka soo jeediyey xafladdii.
Guddoomiyaha ururka Puntland Diaspora Forum, Abdulkadir Hashi, ayaa markaas soo jeediyey warbixin uu kaga hadlay jaaliyadda ku nool qurbaha iyo wax la gudboon Dawlad Goboleedka Puntland si ay dadkaas u soo dhaweeyaan marka ay dalkii ku laabtaa,
CabdulQaadir Xaashi Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
CabdulQaadir waxa uu markaas madasha ku soo dhaweeyey Madaxweynaha DGPL, Dr. C/raxmaan Maxamed Faroole oo dadweynihii kasoo qayb galay casho sharafta hadal u jeediyey.
Dr. C/raxmaan Faroole Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Gabagabadii xafladda kaddib waxaan waraysi kooban la yeelanay qaar ka mid ah dadweynahii ka soo qayb galay xafladda, waxaana waraysanay C/raxmaan Dalmar iyo C/rashiid Muuse Barre...
Bidix: C/rashiid Muuse Barre iyo C/raxmaan Dalmar
Waraysiyadaas Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Ugu dambayntii waxaan waraysi la yeelanay Yaasiin Yabarag oo ah xubin ka mid ah ururka PDF oo ah ururka soo qaban qaabiyay xafladda cashosharafta ee loo sameeyay waftiga madaxweynaha DGPL.
Yabarag iyo C/fataax (oo xiriirinayey xafladda)
Waraysiga Yabarag Halkan ka Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Sawirada Xafladda Minneapolis Halkan ka daawo...
Sawiirada halkan ka daawo...
Warsaxafdeed: Madaxweyne Farole oo la kulmay jaaliyada Puntland ee Minnessota
Xafiiska Warfaafinta Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland iyo waftigii uu hogaaminyey ayaa xaley 29 June,2009 ka qayb galey xaflad casho ah oo ay soo qaban qaabiyeen Golaha Qurbajoogta Puntland [ Puntland Diaspora Forum] tasoo ka dhacdey Hotel Hilton oo ku yaal Bartamaha magaalada Minneapolis.
Xafladaan casho oo ay kasoo qayb galeen jaaliyada reer Puntland ee ku nool Minnesota iyo marti sharaf kale oo ay kamid yihiin mas�uliyiin ka socota gobolka [ Minnesota] kuwaasoo tiradooda kor u dhaafeysay 300 oo qof.
Furitaanka kulankaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay xogwarano ku saabsan socdaalkii wafdigu ku yimid Washington iyo kulamadii kala gadisnaa ay la qaateen mas�ulyiinta ka tirsan hay'adaha dowliga ah ee Mareykanka.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ah ee Puntland oo ka hadley munaasabadaan ayaa sheegey in maamul cusub ku guuleystey inuu dib u dhiso hay'adihii dowliga ah kuwoodii ugu muhimsandaa sida ciidamada, maaliyada iyo arrimaha bulshada. Waxay kaloo Wasiirada xuseen sida ay lagama maarmaanka u tahay taabagalinta nidaamka xisbiyada badan iyada oo maamulka cusub ku guuleysay meel marinta Dastuurka cusub.
Amb.Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo ah Gudoomiyaha Golaha Qurba joogta Puntland [ Puntland Diaspora Forum] oo ka hadley sida ay lagama maarmaanka u tahay isku xirka qurba joogta Puntland iyo MGPL iyo kor u qaadida sumcada Puntland [ Puntland International Profile]. Gudoomiyaha Golaha Qurba joogta Puntland Amb.Cabdulqaadir Cabdi Xaashi ayaa ku soo dhoweeyey hadalka Madaxweynaha DGPL Cabdiraxman Maxamad Maxamud Farole oo halkaas ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadley doorka maamul goboleedka Puntland ka jiro xal u helida dhibaatada ka taagan Somalia gaar ahaan Konfurta iyo qaybo ka tirsan gobolada dhexe isaga oo xusey in Somalia isugu imaan karto oo kaliya nidaamka Federaalka.
Mr.Farole ayaa jaaliyada ka codsadey iney ka qayb qaataan dib-u-dhiska Somalia gaar ahaan maamul goboleedka Puntland isaga oo xusey iney uga qeyb qaadan karaan siyaabo kala duwan, sida dib u dhiska hay'adaha ku mashquulsan arrimaha bulshada [ Iskuulida, xarumaha caafimaadka].
Faafin : SomaliTalk.com | June 30, 2009